Dagaal la isku jilbo dhigtay oo ciidamo ka tirsan dowladda ku dhexmaray gobolka Sh/dhexe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dagaal la isku jilbo dhigtay oo ciidamo ka tirsan dowladda ku dhexmaray gobolka Sh/dhexe
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Xawaadley oo ku taala degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in halkaasi dagaal culus oo la isku jilbo dhigtay uu ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan militeriga dowladda federaaalka Soomaaliya, kaas oo ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalkaasi ayaa la sheegayaa inuu bilawday kadib markii ciidankaasi uu soo kala dhexgalay muran ku saabsan dhul-beereed muddooyinkii ugu dambeysay xiisad ka taagneyd.
Labada dhinac ayaa dagaalkaasi isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana dagaalkaasi sidoo kale lagu eedeeynayaa inay ku lug yeesheen saraakiil ciidan oo markii hore dagaalka geliyay ciidamadii ay kala hogaaminayeen.
Ilaa 7 qof oo isugu jira dad shacab iyo ciidamada dagaalamay ayaa la xaqiijiyay in dagaalkaasi ay ku dhinteen, iyadoona ku dhawaad 10 kale ay ku dhaawacmeen.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay ee ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaaalka Soomaaliya ay dhexdooda dagaalamaan, iyadoona dhacdooyinkaan muddooyinkii ugu dambeysay uu ahaa mid kusoo noq-noqday deegaanada ku yaala gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.